XR360 rotary တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ450Plus အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ420E အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
XSL7 / 360 တွင်းတူးစင်
XR360 rotary drilling rig, အမြင့်ဆုံးတူးဖော်သည့်အချင်းသည် 2500mm သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်၊ အမြင့်ဆုံးတူးဖော်ခြင်းအတိမ်အနက်သည် 102 မီတာ၊ အမြင့်ဆုံး output torque သည် 360kN · m နှင့်အင်ဂျင်စွမ်းအားမှာ ၂၉၈kW ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပွတ်တိုက်မှုအမျိုးအစားနှင့်စက်သော့ခတ်အမျိုးအစား drill pipe drilling များအတွက်သင့်လျော်သည်။
XR360 အလှည့်ကျသည့်တူးစင်သည်ကျယ်ပြန့်သောအထူးတည်ဆောက်ပုံအခြေခံအဆောက်အအုံပုံများနှင့်အခြားတွင်းတူးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားတူးဖော်ခြင်းအလုပ်များကိုအလေးထားရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလည်ပတ်မှု၏အားသာချက်များရှိသည်။
၁။ အထူးဟိုက်ဒရောလစ်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကိုယ်ထည်နှင့်ကြီးမားသောအချင်းကွပ်မျက်နိုင်သောအထောက်အပံ့၊ တည်ငြိမ်မှုမြင့်မား။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူခြင်းနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောလမ်းလျှောက်ခြင်း။
2. စက်၏ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏လုံခြုံမှုနှင့် Euro III ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများကိုသေချာစေရန် CE စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
၃။ FOPS လုပ်ဆောင်ချက်၊ ညှိနိုင်သောထိုင်ခုံ၊ လေအေးပေးစက်အပူ၊ အအေးခံခြင်း၊
4. သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး၏သက်တမ်းကိုများစွာရှည်စေပြီးအသုံးပြုမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည့်ရှေ့ single-rope အဓိက winch ဖွဲ့စည်းပုံကိုမွေးစားပါ။
၅။ ကြီးမားသောတွင်းများ၊ နက်ရှိုင်းသောမြေပုံများနှင့်မာကျောသောမြေပြင်များဆောက်လုပ်ရန်အတွက်သုံးနိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းချောင်းများအများအပြားရှိသည်။ အနက်မှာ ၁၀၂ မီတာရှိသည်။
ဗဟိုချောဆီအရည်ကြည်စနစ်၏ 6. စံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ; လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို
မက်စ် တူးဖော်ရေးအတိမ်အနက် (drill bit စည်အမြင့်: 0.8m)
အလုပ်လုပ်အခြေအနေ (L × W × H) ရှိတူးစင်၏အရွယ်အစား။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေ (L × W × H) ရှိတူးစင်၏အရွယ်အစား။
စုစုပေါင်းယူနစ်၏အလေးချိန် (စံပုံစံ၊ တူးဖော်ခြင်းကိရိယာမှအပ)
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပါဝါ / မြန်နှုန်း
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် မက်စ် အဓိကစုပ်စက်၏အလုပ်လုပ်ဖိအား
rotary drive ကို မက်စ် torque
လူအစုအဝေးဆလင်ဒါ (စံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ) မက်စ် ဖိအားအင်အား
အဓိက winch ရုတ်တရက်အင်အားစု
အရန် winch ရုတ်တရက်အင်အားစု
တူးရွက်တိုင် လက်ဝဲ / ညာ
ခရီးသွားခြင်း မက်စ် ခရီးသွားနှုန်း
Max.Climbable gradient ကို
ပြင်ပအကျယ် (min. -max)
3500 ～ 4.800
နှစ်ခု longitudinal ဘီးအကြားဗဟိုအကွာအဝေး
အင်ဂျင် ကချင် အမေရိကန်
ဟိုက်ဒရောလစ်အဓိကစုပ်စက် Rexroth ဂျာမနီ
ဟိုက်ဒရောလစ်အဓိကအဆို့ရှင် Rexroth ဂျာမနီ
rotary drive ကို၏ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ
အဓိကဝန်တင်လက်လျှော့စက် Rexroth တရုတ်
ခရီးသွားလျှော့ချ Rexroth တရုတ်
Slewing လျှော့ Rexroth တရုတ်
အဆို့ရှင်မျှတမှု Rexroth တရုတ်
Controller TTC အီးယူ
Rotary drive ကိုလျှော့ Bonfiglioli တရုတ်
ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် Ander တရုတ်
Rotary drive ကိုတံဆိပျ အာဇီ တရုတ်
နည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုများကိုသင့်အားထိထိရောက်ရောက်အသိပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလက္ခဏာများသည်အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ နားလည်ပါ။
ရှေ့သို့ XR280D rotary တူးဖော်ရေးတူးစင်
နောက်တစ်ခု: XRS8 / 45 rotary တူးဖော်ရေးတူးစင်
XZ6600 အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်
YG -13 အသေးစားတူးစင်
XSL5 / 280 တွင်းတူးစင်
XSL7 / 350 တွင်းတူးစင်
အလျားလိုက် directional တူးဖော်ရေးတူးစင်, ကျင်းပေါက်တူးစက်, hdd တူးဖော်ခြင်းစက်, hdd တူးစင်,